स्मार्ट चस्मा : फोटो र भिडियो खिच्न मिल्ने, गीत सुन्न र फोन गर्न पनि मिल्ने - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार स्मार्ट चस्मा : फोटो र भिडियो खिच्न मिल्ने, गीत सुन्न र फोन...
फेसबुकले आफ्नो पहिलो ‘स्मार्ट ग्लासेस’ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा फोटो र भिडियो खिच्नका लागि दुईवटा क्यामरा जडान गरिएको छ ।
Previous articleराष्ट्रपतिले प्रचण्ड पत्नी सीतालाई किन दिइन् पदक ?
Next articleसुटिङकै क्रममा कलाकार रमेश केसीको निधन